Bogga Hore > Causes > Xasaasiyad
1 Xasaasiyad (allergic)
Haddii qof uu xasaasiyad leeyahay waxa suurta gala in uu ka jawaab celiyo, tusaale ahaan waxa ruuxu dareemayaa duuf qoyan, waxa ku adkaanaysa neefta, indho cuncun ama finan ka soo baxa maqaarka, inkasta aya tani tahay mid nadir ah. Waxa kale oo suurta gala in ruuxu kaga jawaab celiyo cadanyo ba’an oo dareenka kicinaya waxa loogu yeedhaa Anaphylaxis. Dareen-celintu waxay noqon kartaa mid nafta halis galisa waxaana loo yaqaana xasaasiyada shooga ama kugu soo boodaysa si baraad la’aan ah.
Maadooyinka sababi kara xasaasiyadda lama filaanka waxa ka mida, Lawska, yicib, kalluunka iyo caanaha, sidoo kale waxa saamayn xasaasiyadeed keeni kara waa cayayaanka sida shinida iwm.
Haddii aad leedahay xasaasiyada lama filaanka ah waxa wacan inaad markasta haysato, oo ay boorsada kuugu jirto dawada xasaasiyadaha. Adrenaline injection. Waa dawo laysku mudo oo qaabka qalinka oo kale u eeg.
Hadii aad hubto inaad leedahay xasaasiyad waxa muhiima inaad dhakhtarkaaga la yeelato kulan kana doodaan qaabka aad uga hortagayso xasaasiyada.
Marka koowaad qofka waxa uu ka dareemayaa kabuubyo taagan dibnaha iyo carrabka, ama wajiga oo casaada. Waxaanad sidoo kale yeelan kartaa cuncun, cuncunkaas oo ka bilaabmaya dhakada kadibna ku fidaya wajiga, sanka yo carrabka.
Hadii aanad helin daawo si dhakhso ah xaaladaada way sii xumaan, waxana ku haleelaya tusaale ahaan arrimahan.
Dibnaha, Carrabka iyo cunaha oo ku barara
Cuncun iyo finan jidhka ah
Xanuun caloosha, shuban iyo matag
Qufac, neefta oo ku qabata iyo hadalka oo ku dhiba
Madax wareer iyo itaal darni
Haddaad leedahay xasaasiyad ood haysatid Adrenaline pen waxad sida ugu dhakhsaha badan kumudi bawdada qaybta sare, waa caadi hadaad isku durtid adoo maryo khafiifa sita.
Hadii aad haysato kaniino laguu qoray waxay falgalkeedu qaadanyaa waqti, sidaa awgeed waxa marka hore haboon inaad qaadato Adrenaline pen.
Hadii ay xasaasiyadu kaa dagin mudada u dhaxaysa 5-15 daqiiqo, waxad isku mudi kartaa adrenaline pen xabbad kale.
Sidaas awgeedbay u fiicantahay inaad haysato Adrenaline pen badan, waa hadaad ka fogtahay goobaha caafimaadka.
Hadii Ruuxa uu neeftu qabato waxa haboon in la bilaabo neefsashada loo marayo CPR
Hadii ay adgtahay xaaladu oo degdeg kugu jiro waxa haboon in aad is dajiso sida ugu dhakhsaha badan.
Macluumdka kor ku qoran waa la badali karaa.